अर्थमन्त्री – Health Post Nepal
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अरू सबै सरकारी कर्मचारीकाे भत्ता खारेज गरिएकाे बताएका छन्। आगामी बजेटमा साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी भत्ता कटौती गरिएको हो। बैठकभत्ता, खाजाभत्ता, सेमिनार...
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य सेवाको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरिने बताएका छन्। सरकारी स्वास्थ्य सेवामा अहिलेसम्म २०५१ सालकै दरबन्दी कायम छ। जनसंख्या दोब्बर हाराहारी पुग्दा पनि स्वास्थ्यमा २०५१ सालदेखि दरबन्दी थपिन...
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवजार खतिवडाले सरकारले बजेटमा प्रमुख राजमार्गहरूमा ट्रमा सेन्टर सेवा विस्तार गर्ने र कान्ति बाल अस्पतालमा आईसीयू थप गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। कान्तिलाई बालरोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने...
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवजार खतिवडाले सरकारले सबै स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ सैय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति लिएको बताए। ‘त्यस अनुरुप २ सय ७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७...
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत वर्षभन्दा २२ अर्ब बढी बजेट थपेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा ६८ अर्ब, ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा अहिले ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको...
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाका कारण विश्वले स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकट खेप्नुपरेको बताएका छन्। यसैका कारण नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पनि संकुचन आउने उनले बताए। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।